Submitted by Firaol Tafese on Tue, 01/08/2019 - 17:34
Oromia State Laws
Maatiin qaama/garee ijoo hawaasa tokkoo yoo ta’u nageenyii fi jireenyii hawaasa tokkoo, nagaa fi jireenya itti fufaa tokkoon tokkoon maatii irratti kan hundaa’u waan ta’eef maatiif eegumsa seeraa kennuun hawaasicha eeguu waan ta’uuf eegumsi seeraa maatiidhaaf kennameera.
Read more about IBSA SEERA MAATII OROMIYAA KUTAA TOKKOFFAA: DHIMMOOTA SEENSAA SEERA MAATII
Submitted by Manaye A. Shagrdi on Sun, 12/23/2018 - 18:17
Daldalli utubaa diinagdee biyyaa qofa osoo hin taane jireenya hawaasumaa, aadaa fi siyaasaa biyya tokkoo keessatti illee shoora adda addaa kan taphatu yoo tahu daldala jechuun immoo sirna bittaa fi gurgurtaa meeshaalee (goods) fi tajaajilootaa (services) kan ilaallatu dha. Daldalaanis meeshaalee fi tajaajiloota uummataan barbaadamummaa qaban gabaaf dhiheessee gurgurachuun bu’aa argatuun ofii isaaf maatii isaa jiraachifata.
Read more about HUBANNOO SEERAA DALDALA EEGALUU FI BULCHUUF ISIN BARBAACHISAN: KUTAA TOKKOFFAA
Seerri dhaalaa seeroota hariiroo hawaasummaa bulchan keessaa isa tokko yoo ta’u, itti gaafatamummaan akkaataa qabeenyi namicha lubbuun isaa darbee (dhaalchisaa) gara namoota lubbuun jiranii (dhaaltota isaa) tti darbu irratti xiyyeeffata. Seerrii dhaalaa bara kana bahe jedhamee kaa'amuu baatullee, gaafa miseensi maatii du'e ijoolleen yookan firri aanteen isaa qabeenya isaa dhaaluun yookan abbummaan bulchuun gocha waggoota heedduu lakkoofsiseedha.